छह सर्वश्रेष्ठ वाइफाइ वक्ताहरु को - समाचार नियम
छह सर्वश्रेष्ठ वाइफाइ वक्ताहरु को
मार्फत स्ट्रिम तिनीहरू संगीत सुन्न सबै भन्दा राम्रो तरिका हुनुहुन्छ - वा भण्डारण - हाम्रो फोन. तर जो वक्ता प्रयोग गर्न सजिलो हो, र जो सबै भन्दा राम्रो आवाज गुणस्तर प्रस्ताव? हामी परीक्षण गर्न छ राखे
शीर्षक यो लेख “छ सबै भन्दा राम्रो वाइफाइ वक्ता को” इयान टुकर द्वारा लेखिएको थियो, आइतबार 1st मई मा दर्शक लागि 2016 06.00 UTC
£ 499; पाँच amp चालक, 250डब्ल्यू कुल उत्पादन; AirPlay, Spotify, ब्लूटूथ
छिटो सुरु: अनुप्रयोग डाउनलोड गर्नुहोस्, केही स्वाइपहरूको र छुन्छ र तपाईं हुनुहुन्छ. एक मिनेट वरिपरि (प्रारम्भिक सेट-अप).
डिजाइन: सुखद तिर्यग्वर्ग आकार आफ्नो sideboard मा राम्रो हेर्नुपर्छ र दायरामा अन्य boxier वक्ता Chunky bookends गर्नेछ. केवल एक केबल आवश्यक, एकाइ केही subtly राखिएको बटनहरू छन् तर हामी तिनीहरूलाई प्रयोग गर्न आवश्यक कहिल्यै. परीक्षण गर्ने एकाइहरूको सर्वश्रेष्ठ अनुप्रयोग, किनकि (केहि सेकेन्ड देखि अलग स्थापना गर्दा) तपाईं यसलाई प्रयोग गर्न छैन.
आवाज: प्राकृतिक Sounding स्वर, तर गीतहरू underpowered महसुस गर्न सक्नुहुन्छ. साँच्चै जीवन आफ्नो संग्रह ल्याउन बिना एक विश्वासी काम गर्छ. गीतहरू सामान्यतया केही goosebumps जगाना प्रत्याभूति, यस्तो जेम्स टेलर गरेको आगो र वर्षा रूपमा, रोकी एक सानो आवाज सक्नुहुन्छ. तथापि, जस्टिन टिम्बरलेक यी वक्ता मा राम्रो सुनिन्छ.
फैसला: उच्च सफ्टवेयर र डिजाइन बहु-कोठा सिस्टम को हब रूपमा Sonos यो एउटा गम्भीर प्रतियोगी बनाउन. तपाईं दुवै अघि किन्न सुनेर प्रयास.
20औं शताब्दीमा ध्वनि: Raumfeld गरेको स्टेरियो Cubes. तस्वीर: कैथरीन ऐनी दर्शक लागि Rose
Raumfeld स्टेरियो Cubes
£ 369; चार चालक 160W; समुन्द्री, Spotify, Napster
छिटो सुरु: डाउनलोड अनुप्रयोग, एकाइ मा एक बटन थिच्न, आगत आफ्नो Wi-Fi पासवर्ड, अनुप्रयोगलाई वरिपरि fumble र विकल्प को आफ्नो प्रवाहका सेवा सामेल अप (हुनत एप्पल संगीत समर्थित छैन). लगभग पाँच मिनेट.
सम्बन्धित: Kanye पश्चिम स्कोर पहिलो अमेरिकी कुनै 1 प्रवाहको मार्फत एल्बम
डिजाइन: आपसमा स्पिकर जडान गर्न एक शक्ति लाइन र एक केबल आवश्यक. एक बिट clunky - - अनुप्रयोग सबैभन्दा हार्डवेयर जस्तै छ 'विनिर्माण प्रयास र यसलाई सबै भन्दा राम्रो छ
यो उम्कन र परिचित एक आफ्नो प्रवाहका सेवा गर्न सम्बन्धित लीन. यो रेट्रो-शैली मिलाइएको घन बहु-कोठा वक्ता एक सीमा को भाग हो, तपाईं आफ्नो घर वरिपरि विस्तार गर्न चाहनुहुन्छ गर्नुपर्छ.
आवाज: विस्तार धेरै प्रकट, एक पियानो प्रेम, तर बास फोहोर भन्दा विनम्र आवाज सक्नुहुन्छ. उदाहरणका लागि, यो सुन्दर तपाईंको प्रेम गर्न याकूब ब्लेक गरेको सीमा को टक्कर र स्वर reproduces तर बास कम्पन गर्दैन र गर्न जस्तै पर्छ wobble. तथापि, संगीत विशेष evocative आवाज: बोविइ गरेको दाऊदले प्रत्यक्ष एल्बम एकदम वायुमण्डलीय छ.
फैसला: ठूलो स्टाइल र एक प्रत्यक्ष बिक्री मोडेल तल मूल्यहरु राख्न, तर तिनीहरूले संगीत 20 औं शताब्दीमा गरे राम्रो प्रदर्शन.
बहुमुखी: Dali Zensor वक्ता संग DENON Ceol. तस्वीर: कैथरीन ऐनी दर्शक लागि Rose
DENON संगीत + Dali Zensor 1 वक्ता
छिटो सुरु: दुई प्रयासहरू गरे. कुनै अनुप्रयोग डाउनलोड आवश्यक. वरिपरि 10 मिनेट.
डिजाइन: यो प्रवाहका क्षमताहरु संग एक amp छ. त्यसैले स्पिकर तार छन्, तर यो पनि तिमीहरू Olde सीडी प्लेयर सुविधा. तपाईं पनि केही पुराना नमस्ते-Fi स्पिकरहरूमा यसलाई रिग अप सकेजति. खुशी सुनेर पूर्ण पैतृक AM / एफएम रेडियो सुन्ने लागि आपूर्ति गर्ने हवाई मार्फत हासिल गर्न सकिन्छ, वा भर्खरै सुशील turntable थप्दा. तपाईं अप्टिकल आदानों प्रयोग गरेर आफ्नो TV मा तार पनि सक्छ, हुनत कि केबल को एकदम टेङ्गल छ, जो केहि बिन्दु हराइरहेको हुन सक्छ.
आवाज: विस्तार को टन, डी 'एन्जेलो गरेको मा पृष्ठभूमिमा चटर्जी बाहिर ल्याउन ब्राउन सुगर र जेम्स ब्लेक मा पहिले नसुनिएका औंला-क्लिक प्रकट. Missy इलियट गरेको प्राप्त ऊर Freak मा कहिल्यै थप गतिशील महसुस र भ्यान मरिसन गरेको Veedon ऊन अथाह सुनिन्थ्यो.
फैसला: नमस्ते-Fi अलग लागि यसको सीडी प्लेयर र धेरै इनपुटसहितका, यो डिजिटल संगीत को संसारमा बिस्तारै इंच गर्न चाहन्छ जसले संगीत प्रेमी लागि ठूलो विकल्प छ.
bassheads लागि: यस बोस Soundtouch30 तस्वीर: कैथरीन ऐनी दर्शक लागि Rose
छिटो सुरु: यो बोस तपाईँको इमेल ठेगाना र पासवर्ड माग, अद्यावधिक र धेरै entails "कृपया प्रतीक्षा" सन्देशहरू. दुई प्रयासहरू गरे. वरिपरि 20 मिनेट.
डिजाइन: यो सेतो एकाइ खोज्नुहुन्छ एक निजी स्वास्थ्य सुविधा को प्रतीक्षालयमा स्थानको बाहिर - तपाईं कालो संस्करण रुचि हुन सक्छ. यो बोस गरेको SoundTouch अनुप्रयोग प्रयोग बिना नै सञ्चालन गर्न मुश्किल छ, जो mediocre प्रयोगकर्ता अनुभव को एक अनावश्यक पत्र हो. AirPlay वा एप्पल संगीत समर्थन गर्दैन, सम्म कि परिवर्तन त एप्पल मालिक लागि राम्रो विकल्प छन्.
आवाज: पूर्व-वाइफाइ, बोस त सानो कुरा ठूलो आवाज दिन को लागि एक नाम स्थापित, तर अब बजार प्रतिस्पर्धा संग भीड छ, ध्वनि लागि बोस गरेको कान एक retune आवश्यक. संगीत कम जटिल सुनिन्छ, बास संग विस्तार को लागि एक विकल्प रूपमा अप गरिएका. यो रक्सी को एक गिलास थिए भने, यो एक भन्दा बढी-oaked chardonnay हुनेछ.
फैसला: छैन सबै भन्दा राम्रो सफ्टवेयर वा लग, तर तपाईं एक basshead हुनुहुन्छ भने तपाईं बेवास्ता गर्न सक्नुहुन्छ.
प्रयोग गर्न सजिलो: को Sonos प्ले: 5. तस्वीर: कैथरीन ऐनी दर्शक लागि Rose
£ 429; स्याउ संगीत, Spotify, Deezer, समुन्द्री
छिटो सुरु: धेरै सरल. तीन मिनेट.
डिजाइन: तपाईं आफ्नो अनुप्रयोग प्रयोग बिना आफ्नो Sonos सञ्चालन गर्न सक्दैन, तर अनुप्रयोग हो, एक पल्ट तिमी यसलाई पेश, साथै एप्पल र Spotify ती रूपमा डिजाइन. यो स्थिर छ, ड्रप-बहिष्कार धेरै दुर्लभ र बीच स्विच र सँगै आफ्नो घर वरिपरि वक्ता ट्याग हो एक doddle छ. तपाईं जब अर्को कोठा मा सार्न तपाईं मात्रा अप cranking बचत गर्न अपेक्षाकृत cheaply थप एकाइहरु खरिद गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने तथ्यलाई अर्को प्रमुख प्लस छ.
आवाज: Drake को लाइक लागि Optimised. धनी, bassy पलिश ध्वनि कहिलेकाहीं अन्य एकाइहरूको केही यहाँ रेकर्डिङको देखि बाहिर आकर्षित कि विवरण र सम्बन्धले buffs बाहिर. अरु केही आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न थप मात्रा आवश्यक जबकि यो कम मात्रा मा शक्तिशाली सुनिन्छ.
फैसला: प्रयोग उच्च सजिलो, स्ट्रिमिङ सेवाहरूको विशाल दायरा र अन्य एकाइहरूको एक विकल्प बजार नेता Sonos बनाउन, हुनत audiophiles एकदम छैन अप मानक गर्न ध्वनि पाउन सक्छ.
क्रिस्प र गतिशील: क्याम्ब्रिज अडियोको Minx सिस्टम. तस्वीर: कैथरीन ऐनी दर्शक लागि Rose
क्याम्ब्रिज Minx क्सी + Minx लार्ज वक्ता
£ 399; £ 199; 80डब्ल्यू; Spotify, 10 अडियो स्वरूप
छिटो सुरु: तीन मिनेट, निर्देशनहरूको प्रयोग गरेर बिना.
डिजाइन: प्रणाली नियन्त्रण टाढाको नियन्त्रण र क्याम्ब्रिज गरेको दिनांकित-देख स्ट्रिम जादू अनुप्रयोग प्लस Spotify अनुप्रयोग प्रयोग आवश्यक (यदि त्यो तपाईँले प्रयोग गरिरहनु भएको सेवा छ).
सम्बन्धित: वायरलेस कांग्रेस हेडफोन समीक्षा मा सोनी h.ear: साँच्चै ठूलो को बस लजालु
यो रूपमा अन्य एकाइहरु रूपमा सुविधाजनक छैन, जो एक स्मार्टफोन संग विशुद्ध नियन्त्रण गर्न सकिन्छ. कुनै AirPlay जडान छ र एप्पल संगीत समर्थित छैन, त्यसैले यो म्याक भक्त लागि आदर्श छ. यो सेट-अप साँच्चै प्रयोगकर्ता एक नेटवर्क भण्डारण यन्त्रमा अप हुक गर्न चाहने लागि निमित्त (NAS) आफ्नो संगीत संग्रह को उच्च संकल्प फाइलहरू समावेश.
आवाज: क्रिस्प र सबै विधाहरू मार्फत गतिशील. रानी गरेको को बुट STOMPING र ताली हामी तपाईं हल्लाउनेछु clompy भन्दा ऊर्जावान सुनिन्छ. आफैंलाई Selena Gomez हातमा जस्तै यो गर्नुपर्छ स्पिकर बाहिर पप.
फैसला: तपाईं आफ्नो फोन संगीत स्ट्रिम गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने माथि-विशेष, तर यो योजना अप NAS र पनि एक turntable गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने उल्लेखनीय हुनेछ.
को Sonos प्ले को गहिराई समीक्षा मा:5
गुगल Chromecast अडियो समीक्षा: £ 30 को लागि आफ्नो वक्ता अनलाइन लिन
अर्को निजी अन्तरिक्ष यान ISS रन बनाउने
माछा तेल मानसिक स्वास्थ्य समस्या रोक्न मदत गर्न सक्छ ...
इन्टेल Xeon E5 v2 प्रोसेसर सुरु
39319	10 लेख, डिजिटल संगीत र अडियो, पत्ता लगाउनुहोस्, विशेषताहरु, पर्यवेक्षक नयाँ समीक्षा, प्रविधि, नयाँ समीक्षा, यो दर्शक, प्रयास र परीक्षण, वाइफाइ
← वैज्ञानिकहरूले एउटा "मस्तिष्क को एटलस" सिर्जना गर्नुभएको छ सात गणित जुवा परिवर्तन भाग्यमानी तरिका कि →